Ibuprofen နဲ့ Tylenol အတူတကွယူတာကအန္တရာယ်ကင်းသလား။ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Ibuprofen နဲ့ Tylenol အတူတကွယူတာကအန္တရာယ်ကင်းသလား။
Ibuprofen နဲ့ Tylenol အတူတကွယူတာကအန္တရာယ်ကင်းသလား။
Over-the-counter (OTC) နာကျင်မှုသက်သာစေသူများသည်နေ့စဉ်နာကျင်မှုများနှင့်နာကျင်မှုများကိုကုသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည့်အပြင်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများမှ - ပျော့ပျောင်းသောအလယ်အလတ်ရှိသောနာကျင်မှုကိုကုသရန်ကူညီပေးပါသည် - လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ရာသီလာခြင်း၊ လူကြိုက်အများဆုံးနာကျင်မှုဆေးဝါးများမှာ ibuprofen နှင့် acetaminophen ဖြစ်သည်။
သင်က acetaminophen ကိုသူ့ရဲ့ brand name Tylenol နဲ့သိလိမ့်မယ်။ Ibuprofen သည် Advil နှင့် Motrin ကဲ့သို့သောယေဘူယျအားဖြင့်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့်ဆေးဖြစ်သည်။
Acetaminophen သည်အများအားဖြင့်အသည်းမှ metabolized လုပ်သောဆေးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် Sasan Massachi , MD,ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Beverly Hills ရှိမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုသမား။Ibuprofen သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိတိကျသောအင်ဇိုင်းတစ်ခုတွင်ဟန့်တားမှုကိုဖြစ်စေသည့် NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug) ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ခြားနားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်acetaminophen (acetaminophen ကူပွန် |acetaminophen အသေးစိတ်ကို) အဖျားလျှော့ချအဖြစ်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။Ibuprofen (ibuprofen ကူပွန် | အသေးစိတ်အချက်အလက် ibuprofen)အဖျားလျှော့ချရန်အဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။
အကြံပြုထားသောပမာဏဖြင့် acetaminophen နှင့် ibuprofen ကိုအတူတကွအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။ တစ် ဦး က 2019 Cochrane ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း တွေ့ရှိခဲ့သည့် ibuprofen နှင့် paracetamol (acetaminophen အတွက်အခြားအမည်) သည်ဆေးတစ်မျိုးတည်းထက်ပင်ပိုမိုနာကျင်မှုကိုသက်သာစေပြီး ၈ နာရီခန့်အကြာတွင်နောက်ထပ်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်လိုအပ်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ က ဟားဗတ်ပြန်လည်သုံးသပ် ibuprofen နှင့် acetaminophen ပေါင်းစပ်သည်ပြင်းထန်သောစူးရှသောနာကျင်မှုအတွက် Codeine သို့မဟုတ် Vicodin ကဲ့သို့သော opioids ကဲ့သို့ထိရောက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့
ဤနာကျင်မှုသက်သာစေရန်အတူတကွအသုံးပြုရန်အန္တရာယ်ကင်းသော်လည်းဒေါက်တာ Massachi သည်ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်များတွင် acetaminophen နှင့် ibuprofen တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းသောက်သုံးရန်သာအကြံပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အီဘူဖရောဖင်သို့မဟုတ် Tylenol တို့ကိုဖျားနာမှုနည်းစေခြင်းဖြင့်သီးခြားလူနာများရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဆေးနှစ်မျိုးလုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိဘဲအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ကြောင်းသူကဆိုသည်။
သက်ဆိုင်သော: ibuprofen နှင့် Tylenol တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
Ibuprofen နဲ့ acetaminophen ဘယ်လောက်သုံးလို့ရလဲ။
Ibuprofen နှင့် acetaminophen တို့ကိုအတူတကွဘေးကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အနိမ့်ဆုံးဆေးများဖြင့်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်ပြီးတစ်နေ့လျှင်သောက်သုံးသင့်သောဆေးပမာဏထက်မပိုသင့်ပါ။
Theဒေါက်တာ Massachi ၏အဆိုအရ ibuprofen အတွက်ပုံမှန်သောက်သုံးမှုသည်ရှစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီလျှင်အများဆုံး ၈၀၀ မီလီဂရမ်နှင့် ၆ နာရီလျှင် ၆၅၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးနိုင်သည်ဟုဒေါက်တာမက်ဆာချိကပြောကြားခဲ့သည်။
Over-the-counter တန်ပြန်ဆေးသောက်သည့်ဆေးပမာဏသည်ခြောက်နာရီလျှင် 200-400 mg ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများသည်တစ်နေ့လျှင် Ibuprofen ၏အများဆုံး ၃၂၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ပို၍ မယူသင့်ပါ။ လူနာအများအပြားတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသောကြောင့်လူနာများသည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်အနည်းဆုံးသောက်သုံးသင့်သည်။ လူနာများသည်တစ်နေ့လျှင် ၃၂၀၀ မီလီဂရမ်အမြင့်ဆုံးပမာဏအထိဆေးများကိုမထိုးသွင်းမီလူနာများသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ထက်မပိုသောဆေးများကိုရရှိပြီး၊ အနိမ့်ဆေးများဖြင့်စတင်သင့်သည်။
acetaminophen စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up ကိုနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည့်အခါထွက်ရှာ!
ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၂၅ မှ ၆၅၀ မီလီဂရမ်အားဖြင့် Acetaminophen ကိုရရှိနိုင်သည်။ ၆ မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ်တည်းသောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၂၅ မီလီဂရမ်ဆေးပြား ၂ လုံးဖြစ်သည်။ acetaminophen အမြင့်ဆုံးပမာဏသည်တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် ၂၄ နာရီအတွင်း 3000 mg ထက်မပိုပါ။ ရှားပါးသောအခြေအနေများတွင် ၂၄ နာရီအတွင်း acetaminophen ၄၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်ရန်စိတ်ချရသောလူနာတစ် ဦး အားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ကအကြံပေးလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ရန်နှင့်အသည်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏အကြံပေးမှုအောက်တွင် acetaminophen ကိုအကြံပြုထားသောပမာဏထက်ပိုမသုံးပါနှင့်။
သင်မည်မျှဆေးဝါးသောက်ရမည်ကိုသင်သေချာမသိပါကထိုကဲ့သို့သောဆရာဝန်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆေးဝါးပညာရှင်ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်ကိုအမြဲတမ်းမေးမြန်းပါ။ ၎င်းတို့သည်အခြားမည်သည့် OTC ထုတ်ကုန်များ၌လျှို့ဝှက်ထားသည့်အလားတူပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်သည်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်
ibuprofen နှင့် acetaminophen တို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အကြံပြုထားသောဆေးများအရဤ OTC နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ဆေးနှစ်မျိုးကိုအတူတကွယူနိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးနာကျင်မှုသက်သာရာလည်းအတူပါလာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး , သူတို့သည်အလွန်အကျွံသောက်၏ကိစ္စများတွင်အန္တရာယ်ရှိသောနိုင်ပါတယ်။
ရှားပါးသော်လည်းပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့် ibuprofen နှင့် acetaminophen တို့မှဓာတ်မတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုများ (အဖု၊ အုံမှရောင်ရမ်းခြင်း)၊ အသံပြာခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ ibuprofen အလွန်အကျွံသည်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှသွေးထွက်စေပြီးအစာအိမ်အနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ acetaminophen ကိုအလွန်အကျွံသုံးခြင်းဖြင့်အသည်းပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကဆေးကုသဖို့လိုတယ်။ 911 သို့ခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဌာနကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေသင့်သည်။
ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော ibuprofen သို့မဟုတ် acetaminophen?
တ ဦး တည်းအခြားထက်ပိုလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာ Massachi ကပြောပါတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးတွင် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြissuesနာများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အလားအလာရှိသည်။ အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း၎င်းတို့ထိရောက်မှုရှိစေရန်သေချာစေရန်သင့်လျော်သောပမာဏဖြင့်သတိထားရမည်။ သို့သော်တ ဦး တည်း per se အခြားထက်ပိုမိုထိရောက်သောနှင့်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရွေးချယ်ခြင်းလူနာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများ (ဥပမာ, အဖျားပူးတွဲနာကျင်မှုနှိုင်းယှဉ်ဥပမာအဖျား) နှင့်အတူ align သင့်ပါတယ်။
ပြcomplနာများမှရှောင်ရှားရန်သင် OTC နာကျင်မှုသက်သာစေသောဆေးများကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာပေါင်းစပ်ပါ။
Ibuprofen သည် NSAID ဖြစ်ပြီးအခြား NSAIDs နှင့်မပေါင်းသင့်ပါ။ NSAIDs များသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိတူညီသောယန္တရားကို အသုံးပြု၍ အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
Acetaminophen သည် NSAID မဟုတ်ပါ။ Advil, Motrin, Aspirin သို့မဟုတ် Aleve (naproxen) စသည့် NSAIDs များနှင့်ရောနှောနိုင်သည်။ ဆေးများကိုပေါင်းစပ်သောအခါအကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးများကိုသာသောက်ပါ။
ဥပမာ NSAIDs နှင့် / သို့မဟုတ် acetaminophen ပါဝင်သော OTC ထုတ်ကုန်များကိုသတိပြုပါ၊ ဥပမာအနေဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအတွက်ပေါင်းစပ်ဖော်စပ်ထားသည့်ဆေးများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းတွင်ပါဝင်သည်ကိုသေချာမသိပါကဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲတမ်းမေးမြန်းပါ။
ခွဲစိတ်ကုသမှုနာကျင်မှုများအတွက် Ibuprofen နှင့် acetaminophen , Cochrane Review သည်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန (NIH) တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဘိုင်အိုဖာဖင်နှင့်အက်စီတမင်ဖင်ပေါင်းစပ်မှုသည် opioids ကဲ့သို့ထိရောက်သည် , ဟားဗတ်
နာကျင်မှုသက်သာစေသောသူများနှင့်အတူသတိထားပါ ၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)
မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိန်းဂဏန်း ၂၀၂၁ - မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဆမည်မျှရှိသနည်း။
oxycodone acetaminophen5325 mg ပြင်းသည်